David Brenner reflects on rebel governance in Myanmar and how it challenges Conflict Studies paradigms.
ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရခြင်းများ၊နိင်ငံရေးအမြင်-အာဏာသိမ်းမှုကမြန်မာနိုင်ငံ၏လူငယ်ထုကို မည်သို့ စည်းလုံးစေခြင်းနှင့်ကွဲပြားစေခြင်း တို့ဖြစ်စေပါသလဲ။
များ၏လူမှုဘဝပေါင်းစည်း နေထိုင်ရေးတွင် မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိစေသည်ကို Francesca Chiu ကဆွေးနွေးထားပါသည်။
Posted on January 24, 2022 April 29, 2022
​​Zin Wai Yan argues that the Burman majority should educate themselves for the good of…
Personal struggles, political lens: how the coup unites and divides Myanmar’s youth
Posted on January 17, 2022 March 7, 2022
Francesca Chiu discusses how the post-coup struggles faced by Myanmar’s youth affect social cohesion.
Escalating Crisis in Myanmar fromaCross-border Perspective
Posted on December 20, 2021 June 14, 2022
CV Lalmalsawmi discusses the repercussions of Myanmar’s coup from across the border in Mizoram.
သတ္ထန္တရကပ်နှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမှုတွင် တုဏှိဘာ၀ေဖြစ်သွားကြခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲ လိုအပ်နေမှု￼
Posted on December 9, 2021 March 10, 2022
အောင်စိုး (ကလောင်အမည်) အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၁ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ တုန့်ပြန်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကျိုးဆက်များအား ရှာဖွေဖော်ထုတ် ရေးသား ထားပါသည်။
Posted on November 10, 2021 January 11, 2022
Posted on November 3, 2021 January 6, 2022
Aung Soe explores the implications of the United Nations Security Council’s response to Myanmar’s 2021…